$ 57.60 $ 72.00 Ị chekwaa 20% ($ 14.40)
Nke a Asia Na-agba ume Kaftan Maxi Dress bụ ihe a ma ama site na Maxi. Uwe ahụ na-ejikọta ihe eji eme ihe n'oge ochie na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị elu. Ahia a na-eme ka ejiji Kaftan Maxi ga-enye nwanyi ọ bụla nke tinyere ya n'ile anya nke oge a.
A na-ejikọta ụdị ejiji ahụ ma kpoo ya. Ọ nwere ihe ndị mara mma dịgasị iche iche; gụnyere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ, na-edozi ya na ákwà oji. Nzube a na-eme ka ejiji eji eji ejiji n'emeghị ka o doo anya.
Uwe aka Kwụsị nanị mgbe ikpere aka while uwe ahụ bụ ogologo ụkwụ ụkwụ na-adịkarị ụdị ejiji. Enwere akpa on ma n'akụkụ nke uwe. Otu n'ime oji dị oji, nke ọzọ na-atụgharị uche, na-agbakwụnye aka dị mma iji mara uwe ahụ.
Uwe a nwere ike na-eyi ngwa ngwa n'ihi na oge ọ bụla, dị ka ọ na-akọrọ niile igbe maka ịdị mma na mma. Ọdịda omenala Asia nke e dere n'ike mmụọ nsọ ga - eme ka ị pụta n'ìgwè n'ihi ezi ihe kpatara ya.
Ogologo aka uwe: Ọkara